Kushayisana amakhanda kothishanhloko nama-SGB | News24
Kushayisana amakhanda kothishanhloko nama-SGB
PHOTO: nokuthula khanyile Abazali ababhikishe ngaphandle kwaseKhethindlelenhle Primary ngoMsombuluko
BABHEKENE ngeziqu zamehlo abazali kanye nothishanhloko ezikoleni ezimbili zaseMgungundlovu iKhethindlelenhle Primary e-Azalea kanye neSilwanetshe Primary eWillowfontein ngendlela izikole ezilawulwa ngayo.
EKhethindlenhle baluqale kabi usuku ngoMsombuluko abafundi bakhona ngesikhathi abazibize ngabazali bevala amasango bethi bafuna umbiko mayelana nokusetshenziswa kwezimali kulesikole.
Umbhikisho kuthiwa ubuwandulela umhlangano obekhona emphakathi ngeSonto lapho bekudingidwa khona indlela lesikole esilawulwa ngayo.
Kuvele ukuthi ngonyaka owedlule isigungu esingamele isikole sibhalele uMnyango wezeMfundo siwucela ukuthi uphenye kabanzi ngokusetshenziswa budedengu kwezimali zesikole kodwa kuze kube manje umbiko ogcwele ngalokhu ubungakakhishwa. Kubikwa ukuthi abafundi balesikole bebekhokhiswa imali kodwa kungacaci ukuthi ishonephi.
I-Maritzburg Echo ithole ukuthi uthishanhloko wakulesikole usulile ngasekupheleni konyaka odlule kanti kumanje kunobambile esikhundleni sakhe.
USihlalo wesigungu esingamele isikole uThandanani Mngoma ebuzwa ngezikhalazo zabazali uthe akakwazi ukuphawula ngoba udaba selusezandleni zoMnyango wezeMfundo.
“Akukho engizokusho njengamanje ngoba udaba selungenelelwe abahloli futhi ziningi nezinkulumo eseziqhamuka emaceleni ezingaveli kuthina njengamalunga esigungu esingamele isikole.”
IKhansela ku-Ward 10 uNkosinathi Gambu ebuzwa mayelana naloludaba lokubhikisha kwabazali ubhokele intatheli ngolaka .
“Akukho engizokuphawula kodwa ngangikhona esikoleni ngesikhathi kunalombhikisho futhi imina owasiza ukudambisa isimo kwagcina sekuvulwe namasango esikole. Awukwazi ukungibuza ukuthi udaba ngiyalwazi yini ngoba ngangikhona,” kusho yena.
Khona manjalo eSilwanetshe uthishanhloko nesigungu esingamele isikole kubikwa ukuthi babhekene ngeziqu zamehlo njengoba kuthiwa uthishanhloko ubekhokhisa izingane ezifunda uGrade R imali engango R300.
Umthombo ongaphakathi uthe isigungu esingamele isikole sayichitha eyokukhokhiswa kwabafundi bakaGrade 1 kuphela lemali kodwa kube kuthiwa izokwenza izidingo zesikole sonke.
“Iningi imali ebikhokhiswa abafundi kodwa okungacaci ukuthi iyaphi. Emuva kokuvalwa kwalo R300 kwaphinde kwavela ukuthi bebekhokhiswa o-R20 njalo ngenyanga ukuze kuthengwe ikhumbi yesikole. Kwaphinde kwavela nokuthi umfundi ngamunye ubekhokha uR100 we-khompyutha kodwa uthisha wayo engekho. I-SGB yayibona ukuthi kukhona abazuzayo ngokwezimali eziqoqwa kubazali kodwa zigcine zingafezi izimfuno. Okubuhlungu ukuthi uMnyango unalo ulwazi ngokuqoqwa kwalezimali kepha awuthathanga sinyathelo.”
Isigungu esengamele lesikole kuthiwa sikhala nangothisha abaqashwa isinyenyela sona singaziswanga.
“Esikoleni kunothisha abangamavolontiya kodwa abangaqashwa ngokugcwele uma kuvela isikhala, kunalokho uthishanhloko uletha abantu bakhe abaseceleni ngaphandle kokwazisa isigungu esingamele isikole. Kukekwenzeka isigungu esingamele isikole sancoma uthisha obeyivolontiya ukuthi aqashwe ngokugcwele kade kuvuleke isikhala kodwa uthishanhloko wathi lesosikhala asisekho. Uma isigungu sikhalaza uthishanhloko uthi lesikole sesilawulwa abantu abaningi.”